RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii ay kooxda Man City ka gaartay Swansea City… (Kumaa ahaa xiddiga garoonka ‘Man of the Match’?) – Gool FM
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii ay kooxda Man City ka gaartay Swansea City… (Kumaa ahaa xiddiga garoonka ‘Man of the Match’?)
Haaruun September 24, 2016
(Swansea) 24 Sebt 2016 – Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa wali laga loodin la’yahay horyaalka Prermier league waxaana ay guul wayn ka gaareen Swansea City oo ay marti u ahaayeen.
Swansea ayaa halka gool oo ay kulankan la timid waxaa u dhaliyey 13 daqiiqo Llorente, halka saddexda gool ee ay dhalisay Man City uu labo ka mid ah dhaliyey Aguero, inkastoo midi ahaa gool ku laad, waxaana kan saddexaad raacsaday Sterling.
Kevin de Bruyne oo ka tirsan kooxda Manchester City ayaa loo doortay xiddiga garoonka kulanka ee Man of the Match.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankan:-
>- Waxay ahayd markii ugu horreysay oo kulan horyaalka xilli ciyaareedkan la kala nasto Manchester City oo aan gool ku hoggaaminaynin ciyaarta qeybta hore.
>- Sergio Aguero ayaa dhaliyey goolkiisii 11-aad xilli ciyaareedkan tartammada oo dhan, waxaana uu dhaliyey 28 gool 27-kii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ciyaaray horyaalka Premier League.
>- Fernando Llorente ayaa goolkiisii ugu horreeyey Premier League u dhaliyey kooxda Swansea, waxaana uu yimid shuutkiisii ugu horreeyey oo uu sameeyey kulankan.
>- Manchester City waa kooxda kaliya ee gool laga dhaliyey, hal kulan maahane midkasta oo ka mid ah lixdii kulan ee Premier League ay ciyaartay xilli ciyaareedkan, micnaha lixda kulan ee horyaalka Ingiriiska oo ay dheeshay Man City hal kulan kaliya ayey shabaqeeda oo nadiif ah garoonka ka baxday, waana kooxda kaliya ee sidaas ay ku dhacday EPL.
>- Labo gool oo uu Sergio Kun Aguero dhaliyey kulankan ayaa ka caawisay inuu guul gaaro kulankiisii 100-aad ee Premier League.
>- Raheem Sterling ayaa dhaliyey afar gool shan kale ka baddana caawiye ka ahaa siddeedii kulan ee uu tartammada oo dhan uu u saftay Man City xilli ciyaareedkan.
>- Tababare Pep Guardiola ayaa guul gaaray lixdiisa kulan ee ugu horreeya Premier League, waxaana uu la sintay Carlo Ancelotti oo rikoodhkaas horay u sameeyey xilli ciyaareedkii 2009-10.
>- Manchester City ayaa guul gaartay 10 kulan oo xiriir ah tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan.
EPL: Kooxda Arsenal oo shan sanadood kaddib ka adkaatay Chelsea, gashayna kaalinta saddexaad ee horyaalka… + SAWIRRO
LA LIGA: Kooxda Real Madrid oo barbaro kala soo kulantay Las Palmas oo ay booqatay… + Sawirro